Tsikalaria kissamos, Crete Region, i-Greece
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Γιάννης
I-villa enhle yezwe enedamu lokubhukuda eliyimfihlo elingu-8m x 4m. Ukubuka okumangalisayo. Indawo enhle yokuzwa impilo yasesigodini saseCretan futhi uhlole amabhishi amahle asentshonalanga ye-Chania. Indawo yokuhlala ebanzi enamagumbi amabili okulala.
Indawo ephansi: Ipulani elivulekile lokuhlala / igumbi lokudlela (i-TV, i-WiFi, indawo yomlilo) kanye nekhishi (ihhavini, i-microwave, umshini wokuwasha izitsha, umshini wokuwasha) elinezicabha zesiFulentshi eziya kuvulandi kanye nomnyango ozinzile oya kuthala elimbozwe ngaphambili. Igumbi lokulala eliphindwe kabili (A / C). Igumbi lokugezela (isigamu sokugeza).
Isitezi esingaphezulu: Igumbi lokulala eliphindwe kabili (A / C) elinegumbi lokugezela le-en suite kanye nomnyango wethala.
Ngaphandle: Amasimu ahlukahlukene avulekile nanomthunzi. Isoso. Ishawa eliseceleni kwephuli. Indawo yokupaka yangasese. Indlu yangaphandle enomshini wokuwasha.
Ukufinyelela okunesango kudamu lokubhukuda langasese (8m x 4m) elinomkhawulo ongapheli.
Yakhelwe ngothando emgwaqeni ongahanjwanga kangako futhi inika umbono omuhle phezu kwezigodi ezivundile, izindawo zeminqumo nezintaba ezingale, uNiki usebenzisa ngokugcwele indawo yayo emangalisayo. Indlu ilungele abathandi bemvelo, abahamba ngezinyawo nabahamba ngamabhayisikili ngokufanayo futhi kunenqwaba yezinyawo emagqumeni ngqo ukusuka emnyango wakho. Kungakhathaliseki ukuthi uhlezi ngasechibini noma kwelinye lamasimu amaningi, ama-panorama ashanelayo angowakho ongawajabulela. Le ndawo yasemakhaya ebukekayo inikezela ngezisekelo ezinethezekile lapho ungathola khona indawo eyingqayizivele yemvelo yaseCretan.
Indlu enamazinga amaningi, izitebhisi zangaphandle zishanela kuze kufike kovulandi abahlukahlukene abahlukahlukene kanye namasimu ahlotshiswe nge-bougainvillea emibalabala, amabhodwe e-terracotta nezihlahla zamahalananda. Ithala elihle elimboziwe esitezi esiphansi lihlanganisa itafula letshe elakhiwe ngesandla, kuyilapho ithala elikhulu elingaphezulu linikeza isithombe indawo ekahle yokujabulela iziphuzo zangaphambi kwesidlo sakusihlwa ezihambisana nokushona kwelanga okujabulisayo.
Kodwa-ke kusuka endaweni enkulu ye-infinity pool terrace, ebekwe phezulu ngaphezu kophahla lwe-terracotta, lapho amakhilomitha namamayela e-panorama enhle ngokumangalisayo yesigodi saseTsikalaria aziveza khona ngempela.
Ukudlula ngomnyango ozinzile wezwe ojabulisayo, ukuhlelwa kwenzelwe ukusebenzisa ngokugcwele indawo yangaphakathi. Ikhishi lepulani elivulekile, indawo yokudlela negumbi lokuhlala ligeleza kalula lisuka kwelinye liye kwelinye, kuyilapho uphahla olukhangayo olunamapulangwe, izindonga zamatshe avele obala kanye nemisebenzi yezandla yaseKrethe yengeza isimilo esitayelani esilula nesingenasizotha. Igumbi lokulala eliphindwe kabili kanye negumbi lokugezela elihlukile nakho kukhona kulesi sitezi. Ihlala ngaphansi kwama-eves esitezi esingaphezulu, igumbi lokulala eliphindwe kabili lijabulela umoya opholile kanye nokubukwa okuhle okuvela kumafasitela amaningi, kuyilapho lihlomula ngegumbi lokugezela le-en suite kanye nokufinyelela kuthala eliphezulu.
Njengoba kunendawo yokuhlala enhle kangaka kanye nokubukwa okungenakuqhathaniswa okungajatshulelwa, izivakashi zingaxolelwa ngokungafisi ukuphuma eceleni kwechibi lendawo. Noma kunjalo, kunekhefi (2km) kanye neRotunda Paradise Park kanye nekhefi (4.8km) ihlinzeka ngohambo oluyindilinga olumakiwe nendlela eyiqiniso ye-eco minded lapho ungathatha khona eyakho imifino futhi ikulungiselele yona ekhefi. Umzila we-E4 waseYurophu unqamula iKrethe usuka empumalanga uye entshonalanga, udlule eduze noNiki futhi ungahanjwa ngezigaba ezincane, kuyilapho umhosha waseTopolia (9.9km) kufanelekile ukuwuhlola. Izinsiza zasendaweni zingatholakala edolobheni elisogwini laseKissamos (7.2km) lapho ama-taverna endabuko kanye nezindawo zokudlela zihlala zibheke amagagasi athambile oLwandle lwaseKrethe. Inqwaba yamabhishi amema nama-cove afihliwe afaka umugqa ogwini ogwini, ne-Nopigia beach (11.2km) ne-Falassarna beach (21.4km) kokubili okufakazela ukukhetha okuthandwayo.
UΓιάννης Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 00000714489